नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बुद्ध एयरको विमानसँग स्याल ठोक्कियो
नेपालगञ्ज– नेपालगञ्ज विमानस्थलमा विमानसँग स्याल ठोक्किएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आएको बुद्ध एयरको जहाजमा स्याल ठोक्किएको हो। जहाज ल्याण्ड गर्ने क्रममा स्याल ठोक्किएको थियो। जहाजसँग ठोक्किएको स्याल मरेको छ। जहाजमा सामान्य क्षति पुगेको बुद्ध एयरको नेपालगञ्जका व्यवस्थापक विनित शाहले जानकारी दिए। जहाजमा ७० जना यात्रु थिए। सबै यात्रु सकुशल छन्। बुद्ध एयर नेपालगञ्जका व्यवस्थापक शाहले जहाल […]
८ वटा जहाज किन्दै बुद्ध एयर
निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले ८ वटा नयाँ जहाज थप्ने भएको छ । दुर्गमका गन्तव्यमा उडान गर्न बुद्धले नयाँ जहाज थप गर्न लागेको हो ।सन् २०२३ को सुरुबाटै नयाँ जहाजबाट उडान गर्ने गरी ८ वटा अत्याधुनिक जहाज थप गर्न लागिएको जनाएको छ । नयाँ जहाज खरिदका लागि कम्पनीले ट्वीनअटर जहाज निर्माता कम्पनीसँग छलफल गरिएको पनि बताईएको छ । अहिले पर्यटकीय र मुख्य शहरमा मात्रै उडान गरिरहेको बुद्ध एयरले नयाँ जहाज थप गरेर दुर्गमका गन्तव्यमा उडान गर्ने छ । पूर्वी क्षेत्रका गन्तव्यमा उडान गर्न बुद्धले रामेछापको मन्थली विमानस्थललाई हब बनाउँदैछ । पश्चिममा उडान गर्न पोखरा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उडान गर्न नेपालगञ्ज विमानस्थललाई हब बनाउने योजनामा बुद्ध एयर छ । बुद्ध २०२४ मा २ वटा, क्रमश २०२५ मा पनि २ र २०२६ मा पनि २ वटा जहाज थप्ने योजना बनाएको छ । पहिलो लटमा सन्२२ भित्रै २ वटा जहाज ल्याउने योजना कम्पनीको छ । हाल बुद्ध एयरसँग १० एटीआर ७२, ३ वटा एटीआर ४२ र २ वटा ब्रिचक्राफ्ट जहाज छन् ।
Bizpati 1 महिना पहिले
बुद्ध एयर प्रकरणः जहाज उडाएर पाइलटलाई मात्र प्रतिबन्ध किन ?
बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा अहिले सबैका परिचित पात्र बनेका छन् । असोज ११ गते सोमबार विराटनगर अवतरण हुन नसकेपछि काठमाडौँ फर्किएर लामो प्रयासपछि जहाजलाई अवतरण गराएर ७७ जनाको ज्यान बचाएको भन्दै वाहवाही कमाएका क्याप्टेन शेर्पा अहिले प्रतिबन्धमा छन् ।बुद्धको एटीआर–७२ विमानका क्याप्टेन शेर्पासहित चालक दलका सदस्यलाई उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लागेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को उडान सुरक्षा डिपार्टले क्याप्टेनसहित चालक दलका सदस्यहरुलाई उडानमा रोक लगाएको हो ।जहाज रिलिजल्याण्डिङ गेयरमा समस्या आएर चालक दलका सदस्यसहित ७७ जना यात्रुलाई जहाजभित्रै रुन बाध्य बनाएको जहाज भने नियमित उडान गर्न थालिसकेको छ । बुद्ध एयर र प्राधिकरणका प्राविधिकहरुले जहाजको अनुसन्धान गर्दा कुनै खराबी नभेटेपछि जहाज नियमित उडानमा छ ।‘अनुसन्धान गर्दा जहाजमा कुनैपनि समस्या देखिएन, त्यसपछि जहाज रिलिज भईसकेको छ’ बुद्धका प्रवक्ता रुपेश जोशी भन्छन्, ‘अहिले उक्त जहाजमार्फत नियमित उडान गरिरहेका छौँ ।’उनका अनुसार नियमित उडान थालेको उक्त जहाजमा अहिले कुनैपनि समस्या देखिएको छैन ।गत सोमबार काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको बुद्धको जहाज ल्याण्ड गर्ने समयमा पांग्रा खुलेको देखाउने इन्डिकेटर बलेको थिएन । त्यसपछि काठमाडौँ ल्याएर आकाशमा कयौँ फन्का घुमाएपछि पांग्रा खुलेको यकिन भएपछि मात्रै अवतरण गराइएको थियो । क्याप्टेनलाई प्रतिबन्ध किन ?क्याप्टेनसहित चालक दलका अन्यलाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नियम अनुसार नै जहाज उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले ‘इन्सिडेण्ट’ भएको अवस्थामा क्याप्टेन र चालक दलका सदस्यलाई ७२ घण्टा काम नलगाउने नीति लिएकाले सोही अनुसार उनीहरुलाई ७२ घण्टाको लागि प्रतिबन्ध लगाईएको जनाईएको छ ।बुद्ध एयरका प्रवक्ता जोशीले पनि क्यानले अनुसन्धानका लागि बनाएको समितिले शुक्रबार वा आइतबारसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उक्त प्रतिवेदनमा के आउँछ सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए । चालक दलका सदस्यलाई प्रशिक्षणप्राधिकरण स्रोतले उनीहरुमा मानसिक त्रास वा अरु केही समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई ‘रिफ्रेश’ गराईनेछ । रिफ्रेश गराउँदा सामान्य प्रशिक्षण पनि दिईनेछ । ‘क्यानको रिपोर्टमा के आउँछ त्यही गर्छौँ’ जोशीले भने, ‘क्यानले क्याप्टेनको लाइसेन्स फुकुवा गर्ने भन्यो भने तत्काल फुकुवा हुन्छ, केही दिन रिफ्रेश गराऔँ भन्यो भनेपनि हामी त्यो गर्छौँ ।’
बुद्ध एयर तत्काल ‘ग्राउन्डिङ’ गर
वर्षा र मौसमका कारण यो याममा हवाई उडानहरु अवरुद्ध हुनु मुलुकका लागि नयाँ कुरा हैन। तर, हवाईजहाजमा यान्त्रिक गडबडी यात्राका बीचमा मात्र पहिचानमा आउनु र यात्रुहरुको सुरक्षा धरापमा पर्नु सुरक्षित यात्राको सिद्धान्त विपरित हो। त्यति मात्र हैन, त्यो सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालकबाट अपेक्षित न्यूनतम दायित्व विपरित पनि हो। यो साता ‘बुद्ध एयर’ का केही उडानहरु यात्रुहरुमा […]
Desh Sanchar भाद्र २०७८
पोखरा–सिमरा सीधा उडान गर्दै बुद्ध एयर
काठमाडौं । बुद्ध एयरले पोखरालाई आधार बनाएर भदौ १६ गतेदेखि पोखरा–सिमरा सीधा उडान गर्ने भएको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक पोखरालाई बेस बनाएर उडान गर्ने उद्देश्यले उक्त कम्पनीले वीरगञ्जको सिमरामा साताको ३ दिन सीधा उडान गर्ने भएको हो । कम्पनीले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सेप्टेम्बर १ देखि पोखरा–सिमरा सीधा उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । शुरुआतमा साताको ३ दिन (आइतवार, बुधवार र शुक्रवार) उडान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । केही समयपछि यात्रुको माग अनुसार दैनिक उडान समेत गर्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पोखराबाट–सिमरा उडान अपराह्न १२ः२० र सिमरा–पोखरा उडान १ः१५ बजे हुनेछ । पछिल्लो समय कम्पनीले पोखरालाई बेस बनाउँदै विभिन्न प्रदेशसँग सीधा उडान शुरू गरेको छ । कम्पनीका बजार निर्देशक रूपेश जोशीले पोखरा–सिमरा सीधा उडानले सिमरा÷वीरगञ्ज वरिपरि रहेका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा चहलपहल बढ्ने बताए । सिमरा÷वीरगञ्ज देशकै ठूलो औद्योगिक कोरिडोर भएकाले व्यापारिक गतिविधिमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी कम्पनीको भगिनी संस्था बुद्ध होलिडेजले यी दुवै गन्तव्यका लागि आकर्षक होलिडी प्याकेज ल्याएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त प्याकेज सिमरा–पोखरा प्याकेजका लागि १० हजार ९९९ रुपैयाँको हुनेछ । यसमा २ रात ३ दिनको प्याकेज र त्यसअनुसार दुईतर्फी हवाई टिकट, पोखरा विमानस्थलबाट होटल तथा होटलबाट पोखरा विमानस्थलसम्म गाडी सुविधा, वातानुकूलित ट्वीन शेयरिङ रूम र बिहानको ब्रेकफास्ट संलग्न रहेको बताइएको छ ।
बुद्ध एयरले यही साउन ३१ देखि भरतपुर–भैरहवा उडान शुरुवात गर्ने भएको छ । कम्पनीका भरतपुर शाखा प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतले हप्तामा आइतबार, बुधबार र शुक्रबार दिउँसो १२ः५५ बजे तीन उडान गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, “पर्यटकीय नगरीसँग हवाई उडान जोड्नका लागि उडान शुरु गर्न लागिएको हो ।” नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका कारण यात्रुले सास्ती व्यहोर्दे आएका छन् । भैरहवा उडानका लागि एकतर्फी भाडा रु दुई हजार ८३५ देखि रु चार हजार ३३५ सम्म तय गरिएको छ । बुद्ध ए
साउन ३१ गतेदेखि भरतपुर-भैरहवा उडान शुरु गर्दै बुद्ध एयर
साउन २०, चितवन । यही साउन अन्तिमबाट बुद्ध एयरले भरतपुर-भैरहवा उडान गर्ने भएको छ । बुद्ध एयरले क्षेत्रीय विमानस्थलहरुलाई जोड्नुका साथै टुरिजम क्षेत्रलाई जोड्ने उद्धेश्यसहित भरतपुर–भैरहवा रुटमा उडान गर्न लागेको हो । बुद्ध एयरले भैरहवा उडान जोडेपछि देशका मुख्य पर्यटकीय स्थल पोखरा, लुम्बिनी, काठमाडौं र सौराहा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र जोडिने विमानस्थल प्रमुख योगेन्द्र कुँवरले बताए । ‘अहिले बुटवल नारायणगढ सडक निर्माणाधीन पनि छ, कुँवरले भने, उडान चलेपछि दुवै तिरका यात्रुलाई सहज पनि हुन्छ । ’ बुद्ध एयर भरतपुरका प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतले साउन ३१ बाट यो उडान हुने मिति तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतवार, बुधवार र शुक्रवार १८ सिटे जहाज चल्ने गरि उडान तालिका तय भएको छ । यसअघि बुद्ध एयरले भरतपुर-काठमाडौं र भरतपुर–पोखरा रुटमा उडान गर्दै आइरहेको छ । केही दिन अघिबाट यति एयरलाईन्सले आफ्नो उडान स्थगित गरेपछि बुद्ध एयरले हाल भरतपुर-काठमाडौं ९ ओटा उडान र भरतपुर–पोखरा एउटा उडान हुँदै आएको छ । भरतपुर भैरहवाको लागि भाडादर जहाजको अकुपेन्सी अनुसार निर्धारण गरिएको बस्नेतले बताए । जसअनुसार यात्रुको लागि तीन किसिमको भाडादर निर्धारण गरिएको छ । ‘कम्पनीले चार हजार ३३५, तीन हजार ३३५ र दुई हजार ८३५ भाडादर निर्धारण गरेका छौं, बस्नेतले भने, यसका लागि बी फेयर, ए फेयर र वाई फेयर गरेर वर्गीकृत गरेका हौं । ’ बुटवल नारायणगढ सडकखण्डका कारण यात्रुहरुको माग र आवश्यकता हेरेर पनि कम्पनीले भरतपुर भैरहवा उडान जोड्न लागेको बस्नेतको भनाइ छ ।
पोखरा–नेपालगञ्ज उडानको तयारीमा बुद्ध एयर
काठमाडौं। बुद्ध एयरले पोखरादेखि नेपालगञ्जसम्म सीधा हवाई उडान भर्ने भएको छ। यही साउनको १७ गतेदेखि कम्पनीले पोखरा–नेपालगञ्ज उडान भर्ने भएको हो। यो गन्तव्यमा साताको तीन दिन सिधा उडान हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार आइतबार,बुधबार र शुक्रबार सिधा उडान हुनेछ। उडान सुरु गर्दा सातामा तीन दिन मात्र गरेपनि यात्रुको माग र चापअनुसार उडान थप्दै लग्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ।
संकटबाट बाहिरिँदै हवाई क्षेत्र
वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रबन्ध–निर्देशक, बुद्ध एयर काेरोना– १९ को महामारीले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमध्येको एउटा हवाई उड्डयन पनि हो । सवा सय वर्षको उड्डयन इतिहासमा यसरी धराशायी हुने गरी संकट आएको...
बुद्ध एयर प्रमुखसित किताब र कृषिका कुरा || End of Season 1 _ च्या खानु भो ? Birendra Bahadur Basnet
Shilapatra माघ २०७७